Ithegi: umthengisi | Martech Zone
Wenza ntoni uMmakishi weDijithali?
Lwesine, Matshi 19, 2015 NgoMgqibelo, ngoMeyi 7, 2016 Douglas Karr
Masivule nje ngokuchaza ukuba bendinomsebenzi walomntu ungezantsi, heh. Njengomthengisi wentengiso yedijithali, sijikeleza kubo bonke abathengi bethu rhoqo ngeveki, sihlalutya ukusebenza kwabo, senze uhlengahlengiso, uphando, ukucwangcisa nokwenza amaphulo amajelo amaninzi. Sisebenzisa izixhobo ngokungaphezulu koku kuchazwa yi-infographic- kunxibelelwano, ukupapasha, ukuphuhlisa kunye nohlalutyo lwezixhobo. I-IMO, uninzi lwabarhwebi lusebenza kule ndawo bakhululeke kuyo. Ayisiyongxaki yokuba
Sabelane nge-infographic, iNdima eNtsha yeGosa eliyiNtloko leTekhnoloji yeNtengiso, okwethutyana ebethetha nokwamkelwa ukuba abaphathi bezentengiso kufuneka babe nobuchule kwezobuchwephesha kwaye babe neetalente zentengiso. Le infographic yinkcubeko ethe kratya kwindlela yayo yokuba kuthatha ntoni ukuba ngumlawuli wentengiso. Ngelixa ndingaphikisani nazo naziphi na ezi ngcebiso zingezantsi, ndothuswa kukuba itekhnoloji ibonakale ingenzi ibakala. Kunye
NgoLwesithathu, Agasti 13, 2008 NgeCawa, Oktobha 4, 2015 Douglas Karr
Emva kokufunda isuntswana leTuned In, bendinomdla wokwenene ngomnye wemibuzo ebuzwe liqela kwiPragmatic Marketing. Ngaba iwebhusayithi yakho iyathetha ngenkampani yakho okanye ithetha ngabathengi bakho? Nangona kubalulekile ukuthethelela igunya lakho kwisithuba sakho, kubaluleke ngakumbi ukuba uthethe kwinto oyiphumezileyo kubathengi bakho. Ndibuze lo mbuzo ku-Twitter kwaye yafumana ingqalelo